Iimidlalo zebhola zebhola yebhola, ukukhanya kweNkundla yeTennis, iiNkundla zeBhola yeBhola kunye nabathengi baseChina
Inkcazo:Ibhola leMidlalo yeBhola,Inkundla yeTennis yoKhanya ,Imibala yeBhola yeBhola,UkuKhanya kweMidlalo yeLed,,
Home > Imveliso > Iintambo zeMidlalo > Ibhola leMidlalo yeBhola
Iintlobo zeMveliso ze- Ibhola leMidlalo yeBhola , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ibhola leMidlalo yeBhola , Inkundla yeTennis yoKhanya ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LED 800w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LEDw00w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LED 500w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphezulu e-LED ukukhanya kwe-300w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Ngaphandle kwendawo ukukhanya kwe-30 degree yi-800w  Qhagamshelana Ngoku
Ngaphandle kwendawo ukukhanya kwe-30 degree ezingama-600w  Qhagamshelana Ngoku
Ngaphandle kwe-LED indawo ebonakalayo 30 iipesenti ezingama-500  Qhagamshelana Ngoku
Ngaphandle kwendawo ukukhanya kwe-30 degree yi-300w  Qhagamshelana Ngoku
Izibane zebhola ze-LED ezingama-800w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Izibane zebhola ze-LED ezingama-600w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Izibane zebhola ze-LED ezingama-500w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Izibane ezingama-300w zeBhola ekhatywayo ye-130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
I-800W i-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-600W I-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-500W I-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-300W i-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya  Qhagamshelana Ngoku
I-BrightStar 800W Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED  Qhagamshelana Ngoku
IBlueStar 600W yangaphandle yebala leMidlalo ye-LED  Qhagamshelana Ngoku
I-BrightStar 500W Ngaphandle kwibala leMidlalo ye-LED  Qhagamshelana Ngoku
I-BrightStar 300W Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhangelwa kwindawo ebonakalayo 800w 130lm / w  Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LED 800w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu Amandla aphezulu e-LED kwindawo ye-800w 130lm / w inobalo engama-65,000lumens. Amandla aphezulu i-800w 130lm / w ukukhanya kwe-LED Luhle ngen- amabala ezinkulu, ezinkundleni kunye nezibonelelo zemidlalo ezifana iinkundla...
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LEDw00w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu Amandla aphezulu e-LED kwindawo ye-600w 130lm / w inobalo engama-65,000lumens. Amandla aphezulu i-600w 130lm / w ukukhanya kwe-LED Luhle ngen- amabala ezinkulu, ezinkundleni kunye nezibonelelo zemidlalo ezifana iinkundla...
Amandla aphezulu ukukhanya kwe-LED 500w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu Amandla aphezulu e-LED kwindawo ye-500w 130lm / w inobalo engama-65,000lumens. Amandla aphezulu i-500w 130lm / w ukukhanya kwe-LED Luhle ngen- amabala ezinkulu, ezinkundleni kunye nezibonelelo zemidlalo ezifana iinkundla...
Amandla aphezulu e-LED ukukhanya kwe-300w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu Amandla aphezulu e-LED kwindawo ye-300w 130lm / w ukubala kwe-65,000lumens. Indawo ebonakalayo ye-LED 300w 130lm / w Amandla aphezulu Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Ngaphandle kwendawo ukukhanya kwe-30 degree yi-800w
Esi siphumo siphezulu sangaphandle Sendawo ye- LED ebonakalayo engama-30 degree 800w inokubala kwe-65,000lumens. Indawo yangaphandle ye-LED eyi-Outdoor800w Ukulungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Ngaphandle kwendawo ukukhanya kwe-30 degree ezingama-600w
Esi siphumo siphezulu sangaphandle sangaphandle indawo ye-LED ibala lama-30 degree 600w linokubala kwama-65,000lumens. I- Outdoor600w i-LED ebonakalayo kwindawo ye-15 degree Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo...
Ngaphandle kwe-LED indawo ebonakalayo 30 iipesenti ezingama-500
Esi siphumo siphezulu sangaphandle sangaphandle kwindawo ye-30 ibala le-500w linokubala kwe-65,000lumens. I- Outdoor500w i-LED ebonakalayo kwindawo ye-15 degree Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Esi siphumo siphezulu sangaphandle Sendawo ebonakala ngaphandle kwe-15 ° 30 ° 60 ° 300w ukubala kwe-65,000lumens. Indawo yangaphandle ye-LED eyi-Outdoor300w 15 ° 30 ° 60 ° Luhle ngen- amabala ezinkulu, ezinkundleni kunye nezibonelelo zemidlalo...
Izibane zebhola ze-LED ezingama-800w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu se-800 800w yeBhola yeBhola ekhatywayo ye-130lm / w sinokubala kwe-65,000lumens. Izibane zeBhola yeBhanyabhanya kwi-800w 130lm / w Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Izibane zebhola ze-LED ezingama-600w 130lm / w
Iziphumo eziphezulu ze-LED ezingama-600w izibane zeBhola ye-130lm / w inokubala kwe-65,000lumens. Isibane sebhola ekhatywayo ze-LED ezingama-600wm kunye ne-ww Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Esi siphumo siphezulu se-500 500 yeBhola yeBhola yeBhola 130lm / w sinokubala kwama-65,000lumens. Izibane ze-LED zeBhanti ekhatywayo ye-500w 130lm / w Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Izibane ezingama-300w zeBhola ekhatywayo ye-130lm / w
Esi siphumo siphezulu se-300w i-taa yeBhola ekhatywayo ye-130lm / w ukubala kwe-65,000lumens. Izibane zeBhola yeBhanyabhanya ezingama-300w 130lm / w Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla...
I-800W i-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya
Esi siphumo siphezulu se-800W i-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya kunokubala kwe-65,000lumens. Isibane se-LED 800w High Mast Stadium Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola...
I-600W I-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya
Esi siphumo siphezulu se-600W ye-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya kunokubala kwe-65,000lumens. Isibane se-600w High Mast Stadium Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola...
I-500W I-LED ephezulu ye-Mast Uwanja wokuKhanya
Esi siphumo siphezulu se-500W i-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya kunokubala kwe-65,000lumens. Ukukhanya kwe-500w High Mast Stadium Light Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla...
I-300W i-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya
Esi siphumo siphezulu se-300W i-LED ephezulu ye-Mast Stadium ukukhanya ukubala kwe-65,000lumens. Ukukhanya kwe-3DW yeMidlalo ePhakamileyo ye-Masters ye-300W kulungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
I-BrightStar 800W Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED
Esi siphumo siphezulu iBlSS 800 800W yangaphandle yebala leMidlalo ye-LED sinokubala i-65,000lumens. I- 800W BrightStar Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
IBlueStar 600W yangaphandle yebala leMidlalo ye-LED
Iziphumo eziphezulu zeBlSStar ezingama-600W zangaphandle zeMidlalo ye-LED yokuKhanya zibala i-65,000lumens. I- 600W BrightStar Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
I-BrightStar 500W Ngaphandle kwibala leMidlalo ye-LED
Esi siphumo siphezulu seBlueStar 500W Ingaphandle leMidlalo ye-LED yokuKhanya inokubala kwe-65,000lumens. I- 500W BrightStar Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
I-BrightStar 300W Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED
Le mveliso iphezulu iBlueStar 300W yangaphandle yebala leMidlalo ye-LED ukubala kwe-65,000lumens. I- 300W BrightStar Ngaphandle kwebala leMidlalo ye-LED Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo...
Ukukhangelwa kwindawo ebonakalayo 800w 130lm / w
Esi siphumo siphezulu sibonisa ukuhla kweLed Spotlight 800w 130lm / w ukubala kwe-65,000lumens. Indawo ebonakalayo 800w 130lm / w I-LED Ilungele ukukhanyisa amabala amakhulu, amabala emidlalo kunye nezixhobo zemidlalo ezinjengeenkundla zebhola...
KwiChina Ibhola leMidlalo yeBhola Abaxhasi
Le mveliso ephakamileyo yebhola yeBhola yeNkundla yeMidlalo kuba ne-lumen count ye-160,000 kunye ne-angle ye-faam yee-degrees ezingama-60. Imveliso ephezulu ye-5000K yeNkundla yokuThanya kweNkundla ilungele ukukhanyisa iindawo ezinkulu zemidlalo kunye neendawo zemidlalo ezifana neenkundla zebhola yebhola yebhola yebhola yebhola yebhola, iinkundla zenkundla ye-tennis kunye neminye imimandla emikhulu. Iintlabathi zeMidlalo yeBhola zakhiwe ngobugcisa bokwenza ubuchule obunelungelo lobunikazi ukuhlala kwiiyure ezingama-45,000+, ukuphelisa isidingo sokubeka endaweni yakho. Ngokutshintsha ii-bulbs / HID / HID / MH ii-bulbs / fixtures nge 200W LED uyanciphisa indleko yakho yombane ngo-80% .Le ndawo enkulu iLed Lighting Field Field ineNqanaba loKhuselo lwe-Ingress eli-67, elithetha uthuli luqinile kwaye lukhuselekile kumanzi okucwiliswa. Ukwakhiwa okusisigxina kwesi silungiselelo esilungisiweyo sangaphandle kunye nesilinganiselo se-IP67 siqinisekisa ukuba ulungelelwano lwakho lunikezelwa kwizinto. Unalo iwaranti eneminyaka engama-5.
Ibhola leMidlalo yeBhola Inkundla yeTennis yoKhanya Imibala yeBhola yeBhola UkuKhanya kweMidlalo yeLed Ibhola leMidlalo yeBhola i-Amazon